Madaxweynaha Puntland oo Maanta Furay Talaalka Hooyada iyo Dhalaanka Puntland – SBC
Madaxweynaha Puntland oo Maanta Furay Talaalka Hooyada iyo Dhalaanka Puntland
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr C/raxmaan Faroole ayaa maanta si rasmi ah u furay Talaalka cudurada Caruurta ku dhaca oo ka bilaabmi doona deegaanada Puntland oo dhan .
Xaflad lagu qabtay xarunta wasaarada Caafimaadka ee magaalada garoowe ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweynaha Dowlada Puntland Dr Faroole, Masuuliyiinta wasaarada Caafimaadka iyo masuuliyiin kale, Hay’adaha UNICEF iyo WHO iyo weliba marti sharaf kale.
Waxaa halkaasi laga soo kala jeediyay hadalo qiimo badan oo quseeya talaalka furmay waxaana ay isku raceen dhamaan masuuliyiintii halkaasi ka hadashay in talaalku yahay muhiimad loogaga hortago cudurada caruurta ku dhaca loona baahanyahay in waalidiinta talaalaan caruurtooda .
Madaxweynaha Puntland Dr Faroole ayaa hadal uu halkaasi ka yiri amaan ugu jeediyay Wasaarada Caafimaadka Puntland isagoo tilmaamay in aanay isku mid aheyn sida iminka uu yahay caafimaadka Puntland iyo sidii uu ahaan jiray hada ka hor.
Waxa uu Madaxweynu sidoo kale halkaasi ku talaalay laba caruur ah oo goobta ku sugned taa soo furitaan u aheyd talaalka caruurta deegaanada Puntland oo dhan.
Halkan ka dhageyso Warbixin ku saabsan Warkan iyo wariye Maxamed Siciid Yuusuf